Umzi mveliso welaphu ongacimi umlilo - Abavelisi belaphu base China ababenzi, abaxhasi
Indwangu yefayibha yeCeramic yenziwe ngefayibha ye-ceramic kunye nenxalenye ethile yefayibha ye-organic, edityaniswe nefayibha yeglasi (ucingo lwentsimbi), yaza yasontwa yaza yalukwa kwilaphu.
Usetyenziso oluphambili lwelaphu eludongeni:
a. Ukufakelwa kombane: ilaphu eludongeni lomkhusane linqanaba eliphezulu lokufakelwa kombane, linokumelana nomthwalo wevolthi ephezulu, kwaye lingenziwa kwilaphu lokuvala, umkhono kunye nezinye iimveliso.
b. Isinxephezeli esingasentsimbi: ilaphu le-silicon yerabha linokusetyenziswa njengesixhobo esiqhagamshelekayo semibhobho. Ingasombulula umonakalo obangelwe kukwanda kobushushu kunye nokucutha ukubanda, kwaye ilaphu le-silicone linokumelana neqondo lobushushu eliphezulu, inxamnye nokubola, ukusebenza ngokuchasene nokuguga, ukuguquguquka kunye nokuguquguquka. Ingasetyenziswa ngokubanzi kwi-petroleum, kwishishini leekhemikhali, isamente, kumthombo wamandla nakwezinye iinkalo.
Le mveliso kulula ukuyiphatha, ukucwangciswa okulula, inokusetyenziswa ngokukhawuleza, kwaye kukhuselwa okusingqongileyo okuluhlaza, lukhetho lokuthintela umlilo, ukulwa umlilo kunye nokuphathwa okungxamisekileyo. "Kungcono ungaze uyisebenzise kunokuba ungabinayo okwethutyana."
I-tarpaulin engacimiyo yenziwe ngobushushu obuphezulu obunganyangekiyo, obunokulwa nokubola kunye nelaphu elinemigca ephezulu yeglasi, ekhalelwe okanye efakwe irabha yesilicone. Yimveliso yezinto ezidityanisiweyo entsha enentsebenzo ephezulu kunye nenjongo ezininzi.
Ilaphu elingenamlilo kunye neTape yeSilicone
Ilaphu elingangenwa ngumlilo ikakhulu lenziwe nge-fiber engacimiyo kunye nengatshiyo, eqhutywa yinkqubo ekhethekileyo. Iimpawu eziphambili: ukungatshi, ubushushu obuphezulu obunganyangekiyo (i-550-1100 degrees), ubumbano lwento, akukho caphukiso, ukuthamba kunye nobunzima, kulula ukusonga izinto ezingalinganiyo kunye nezixhobo. Ilaphu elingenamlilo linokukhusela izinto kwiindawo ezishushu nakwiindawo ezitshisayo, kwaye kuthintele okanye ukwahlulahlula ukutsha ngokupheleleyo.
Ilaphu elingatshiyo lilungele ukuwelda kunye nezinye izihlandlo ngeentlantsi kwaye kulula ukwenza umlilo. Iyakwazi ukumelana neentlantsi, i-slag, i-welding spatter, njl. Iyakwazi ukwahlula indawo yokusebenzela, ukwahlula umaleko osebenzayo, kunye nokuphelisa umngcipheko womlilo onokubangelwa ngumsebenzi we-welding. Inokusetyenziselwa ukufakela ukukhanya, kunye nokuseka indawo yokusebenza ekhuselekileyo, ecocekileyo kunye esemgangathweni.